A Quick nghọta Video mkpakọ - The Leenụ, mgbe & OTÚ-Iji.
pression-mara dị ka data mkpakọ, isi iyi nzuzo (anụmanụ na definition) ma ọ bụ bit-ọnụego Mbelata usoro. A mkpakọ a chọrọ iji belata size nke faịlụ site ngbanwe ụzọ na nwere ike ma na-lossy ma ọ bụ lossless. Àgwà nke ouput video faịlụ dị nnọọ dabere na mkpakọ usoro ma ọ bụ Video mkpakọ algọridim.
Lossy vs Lossless mkpakọ
Gịnị mere Mkpa mpikota onu?
Mgbe bụ mkpakọ Dị Mkpa?
8 Video mkpakọ Software
Eliminates enweghị isi ọmụma na ndị dị otú nhichapụ nke ọmụma a na-ewere na-anabata
Ehichapụ ọmụma bụ irreversible
Ihe Nlereanya nke lossy faịlụ formats bụ MKV na WMV
Eliminates mgbakọ na mwepụ redundancy site na oru oma ngbanwe usoro
Ọ bụ omume na-biaghachi ya na mbụ ala
Ihe Nlereanya nke lossless ifle formats bụ Zip ma ọ bụ rar faịlụ
Mere Mkpa mpikota onu?
Kasịnụ ma ọ bụ chọrọ n'ihi nke compressing a video faịlụ bụ nke mere na file size bụ nta, ma na bukwanu àgwà, ma ọ bụ ezi itule maka a na-eju afọ playback. Isi ihe mere nke video mkpakọ bụ belata akụ ojiji, ya bụ data ohere nchekwa na nnyefe ikike. Data storag e pụtara size nke faịlụ (ie nnukwu ma ọ bụ obere) Ebe, ọsọ nke nbudata, na-ebugote, ebufe ma ọ bụ na-emeghe video faịlụ bụ nke nnyefe ikike.
Na laymen okwu, ọ ga-ewe ogologo oge na-emeghe ma playback a nnukwu video faịlụ tụnyere a nta otu. Ọ ga-ngwa ngwa bulite jidesie gị na-elekọta mmadụ saịtị ma ọ bụ na-achọ na-erughị ohere nchekwa ma ọ bụrụ na ebudatara na PC ma ọ bụ mobile ngwaọrụ. Ọ bụ na-ekwe omume na-ezute playback mbipụta gwụla ma ị mpikota onu video faịlụ n'ọdịnihu.
Mgbe mkpa ka ị Email na video faịlụ dị ka ihe na-ekekọta
Mgbe ọ bụ maka playback on nta meziri, ka ihe atụ na mobile ngwaọrụ
Mgbe ọ bụ maka Embedding ma ọ bụ na-ebugote jidesie na-elekọta mmadụ na saịtị, n'ihi na ihe atụ Facebook ma ọ bụ YouTube
Mgbe ị nwere mmachi ohere nchekwa na-ịchọrọ ka mma ojiji nke ya
Mgbe ọ bụ maka na-ere ọkụ jidesie ihe ngwa anya diski, n'ihi na ihe atụ a DVD
Mgbe ndị video faịlụ Ọkpụkpọ na-anaghị akwado ma ọ bụ dakọtara na nke ugbu a ọkpụkpọ
Kwalite version nke Windows Media coder
-Enye ihe A / B tụnyere button
Echiche dị iche ụzọ dị
2 3D-DCT mkpakọ Software
Na-akwado ezigbo streamlining n'okpuru ala bandwit ọnọdụ
Awade dị iche iche mkpakọ oke na àgwà
Obere-video ọkpụkpọ a gụnyere
3 Windows Movie Onye kere
Simplified mkpakọ usoro ma na elu àgwà
A keukwu wuru na-nchịkọta akụkọ
Ndị ọzọ na atụmatụ na-gụnyere dị ka DVD burner
4 Freemake Video Ntụgharị
Na-ekwe omume mpikota onu ọdịyo faịlụ
Ahaziri presets maka mkpanaka ngwaọrụ
Akpaghị aka na-achọpụta rụọ ezigbo akakabarede oke
Video presets maka a kpọmkwem akakabarede
Wuru na-video clip nchịkọta akụkọ nke video nhazi
Chebe interlaces ọbụna mgbe eku size na-gbanwere
6 ọ bụla Video Ntụgharị
Na-akwado multiple ọsọ ọsọ formats
Wuru na-online video Downloader
Kpamkpam customizable oke na tupu kọwaa nhọrọ
7 VSDC Video Ntụgharị
High akakabarede ọsọ na àgwà
Na-akwado a nso nke elu bupu presets
Ike ịzọpụta onye okpokolo agba ma ọ bụ ọdịyo
Ugboro 30 ngwa ngwa akakabarede nta ka ọ bụla format
Ikuku nyefe nke mmepụta faịlụ ka mobile ngwaọrụ
Otú iwu Software Ọzụzụ Video
> Resource> Video> Video mkpakọ